मलेसियामा सडक दुर्घ-टना, दश जनाको मृ’त्यु ! - jagritikhabar.com
मलेसियामा सडक दुर्घ-टना, दश जनाको मृ’त्यु !
५ पुस, क्वालालम्पुर ।
मलेसियाको से’लान्गोर राज्यको एक राजमार्गमा शुक्रबार अबेर राति भएको दुर्घ-टनामा परी आठ बालबालिकासहित १० जनाको मृ’त्यु भएको अधिकारीहरूले पु’ष्टि गरेका छन् ।
दुर्घ’टनामा तीनवटा कार र एउटा ट्र’क ठो’क्किँएको थियो । रााति ११ः४२ मा एक सं’कट कल प्राप्त भएको सेलान्गोर फायर एण्ड रे’स्क्यू डिपा’र्टमेन्टका निर्देशक नोराजाम खामिसले एक विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएका थिए ।
यस दुर्घ’टनामा परी १७ जनाको ज्या’न गएको जनाइए तापनि १० जनाको मृ’त्यु भएको पु’ष्टि भएको बताइएको छ ।
मृ’त्यु हुनेमा एक पुरुष र एक महिला रहेका छन् भने अन्य आठ जना बालबालिका रहेका छन् । बालबालिकामा पाँच केटा र तीन बालिका रहेका खामिसले बताएका छन् ।
थप समाचार : पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले अफगानिस्तानलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभएको छ– यदि अफगानिस्तानलाई समयमै सहयोग उपलब्ध गराउन नसक्ने हो भने यहाँ मानवीय संकट पैदा हुनेछ ।
अर्गनाइजेसन अफ इस्लामिक कोअ’परेसन’को एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । उहाँले अहिले पनि अफगानिस्तानमा ठूलो सं’कट परेको र यसलाई समयमै समा’धानको उपाय नखोज्ने हो भने यसबाट समस्या पनि उत्पन्न हुन सक्ने बताउनुभएको छ ।
गएको अगष्ट १५ सम्म पनि अफगानिस्तानको करिब आधा जनसंख्या गरिबीमा रहेको र त्यस समयमै यहाँका करिब ७५ प्रतिशत बजेट बैदेशिक सहयोगमा नि’र्भर रहेको भन्दै उहाँले आगामी दिनहरु अफगानिस्तानका लागि निकै कष्ट’कर हुनसक्ने बताउनुभएको हो ।
उहाँले हाल तालिबान शासन सुरु भएपछि यहाँको अवस्था झन् नाजुक बन्दै गएको र वैदेशिक सहायताको रकम पनि उपलब्ध हुन नसकेको भन्दै सहयोगका लगि आग्रह गर्नुभएको हो ।उहाँले वैदेशिक सहायताका लागि विश्व समुदायको ध्याना’कर्षण पनि गराउनुभएको छ । उहाँले अफगानि’स्तानको अवस्थाको सुधारका लागि विदेशी दा’ता राष्ट्र र देशले सहयोग गर्नुपर्ने भन्दै सबैको ध्यानाक’र्षण गराउनुभएको हो ।